Ukutyelela EIreland | Amazwe Nabantu
I-IRELAND eyaziwa ngokuba yi-“Emerald Isle” yahlulwe yangamazwe amabini: elona likhulu yiRepublic of Ireland ezimeleyo, kunye nelinye elincinane eliyiNorthern Ireland eliyinxalenye yeUnited Kingdom.
I-Ireland ibizwa ngokuba yiEmerald Isle kuba ukuxhaphaka kweemvula apho kwenza eso siqithi sisoloko siluhlaza oku kwelitye elinqabileyo eliluhlaza iemerald. Sikwahonjiswe nangamachibi nemilambo emihle kwanothotho lweentaba neenduli ezigudle unxweme.
Abantu baseIreland baye banyamezela iimeko ezinzima. Ngokomzekelo, kuqikelelwa ukuba ukususela ngonyaka ka-1845 ukusa ku-1851, kwafa abantu abamalunga nesigidi ngenxa yendlala nezifo ezabangelwa kukuntlithwa kwesivuno seetapile zalapho sisifo sezityalo. Oko kwenza ukuba abemi abaninzi balapho babalekele kumazwe anjengeBritani, iKhanada, iOstreliya neUnited States. Ngoku bamalunga nezigidi eziyi-35 abemi abakumazwe aseMerika abanemvelaphi yaseIreland.
Abantu baseIreland badume ngokuba nobubele nokubuk’ iindwendwe. Bathanda ukuzonwabisa ngemidlalo enjengokukhwela amahashe, ukudlala iqakamba, umbhoxo nebhola ekhatywayo. Amabhinqa athanda kakhulu umdlalo wehoki.
Kwakhona abantu baseIreland bayakuthanda ukuncokola, yaye bayawuthanda nomculo. Umngqungqo waseIreland udumile ehlabathini lonke. Xa besenza lo mngqungqo abadanisi bema nkqo baze bashukumise iinyawo kuphela ngocwangco nangokukhawuleza.
Iqela lomculo laseIreland
Sele kudlule iminyaka elikhulu amaNgqina kaYehova ekho eIreland. Sithethanje, angaphezu kwe-6 000 amaNgqina ahlala apho efundisa abantu iBhayibhile.
Umculo wesi-Irish udlalwa ngezixhobo eziboniswe ngezantsi, ukususela ekhohlo ukuya ekunene: uhadi, ibagpipe, ifidyoli, ikhodiyani, impempe yenkcenkce, negubu
Indlela Yesigebenga, ekunxweme olusemantla lweNorthern Ireland, yakhiwe ngamawakawaka amatye abangelwe kukudubula kwentaba-mlilo ekufuphi nolo lwandle.
Abemi: Bamalunga ne-4.5 yezigidi abantu abakwiRepublic; bamalunga ne-1.8 yezigidi abakwiNorthern Ireland
Ikomkhulu: ERepublic yiDublin; eNorthern Ireland yiBelfast
Ulwimi: Isi-Irish nesiNgesi
Imozulu: Kupholile yaye zixhaphakile iintshizane zemvula
Iicawa: ERepublic kuxhaphake amaKatolika; eNorthern Ireland ngamaProtestanti namaKatolika